Eureka, ngwa okike ichoro igbanwe igodo gi | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | | Ngwa, Ngwa, General, Nyocha
Na Actualidad Gadget anyị na-aga n'ihu na-ewetara gị ọkachasị ngwaahịa ndị na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, tumadi ndị nke teknụzụ gbara gburugburu ma kee maka nkasi obi anyị. Oge a anyị nwere ihe ga - adịkarị iche n'ihi na ... onye tufubeghị igodo ya oge ụfọdụ? Nke a nwere ike ịnwe akara ụbọchị ya ma ọ bụrụ na ịnwale ngwaahịa a.
Anyị nwere Eureka, ngwa Cellularline nke ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla furu efu na ekwentị gị. Nọnyere anyị n'ihi na anyị ga-ahụ ihe Eureka mejupụtara ma ọ bụrụ na ọ ga-azọpụta anyị na ịkpọasị ọ bụla.
1 Obere, ebugharị na nkume
2 Kedu ihe Eureka nwere ike?
3 Kedu otu o si arụ ọrụ ma kedu otu anyị ga esi jikọọ Eureka?
4 Ọnụ Eureka na ire ere
Obere, ebugharị na nkume
Ọ dị mkpa na Cellularline Eureka dị obere, ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike iwe iwe na karịa ihe niile, ọ ga-abụ oke iwe na-ebu, dịka ọmụmaatụ, n'aka anyị. Emepụtara ngwaahịa a site na Cellularline na mmekorita ya na ndị ọkachamara na geoposition na smart ngwaahịa na Filo. Ngwaahịa ahụ dị ka otu mkpụrụ ego euro-abụọ, ihe na-erughị milimita iri na ibu dị nnọọ mfe nke na n'eziokwu, ọ gaghị ekwusi ike, gịnị kpatara anyị ga-eji mepụta ụdị ihe ahụ.
Njirimara ihe nkedo nke PVC na A na-enye ya na agba anọ: Black, Blue, White and Red. O nwere otu bọtịnụ nke bụ nke ejikọtara na akara Cellularline na nke ahụ ga - eme nyocha ahụ na ntụgharị, ya bụ, ịchọta ama anyị ji jikọta ya, maka nke a ọ na - eji njikọ ahụ eme ihe. Bluetooth Arụ ọrụ a gụnyere n'ọtụtụ ọnụọgụ nke ngwaahịa ndị nwere ike ịgbanye dịka smartwatches na ọla aka egwuregwu. O nwere roba na-eguzogide ọgwụ nke anyị tinyeworo ule ahụ nke na-eje ozi dị ka nko, naanị ya ị nwere ike "kegide" ya n'ụzọ ịchọrọ.
Kedu ihe Eureka nwere ike?
Ọ nwere ịdọ aka ná ntị, ya mere, site na smartphone anyị ga-enwe ike ịgbalite ụda ka anyị wee nwee ike ịchọta ya wee si otú a weghachite ihe anyị furu efu na ihe anyị jikọtara na Eureka. Anyị ga-ahụ na ihuenyo na geopositioning ebe site na GPS nke ahụ ga-egosi kpọmkwem ebe anyị nwere Eureka, ya bụ, dịka ọmụmaatụ ọ ga-enyere anyị aka ịchọta ụgbọ ala ahụ ma ọ bụrụ na anyị echetaghị n'okporo ámá ebe anyị dọwara ya, iji nye ihe atụ nke ihe bara uru anyị nwere ike iji kwa ụbọchị.
Ọ na-eje ozi ịchọta anyị ama, lA ga-eziga amamọkwa ụda na ekwentị anyị mgbe anyị pịa bọtịnụ nke gụnyere Eureka, yabụ anyị nwere ike ịme nyocha ntụgharị, kama ịchọta Eureka anyị ga-ahụ ama anyị. Otu ihe ahụ na-eme ma anyị rụọ ọrụ ahụ Mpaghara Nkasi Obi, Nke ahụ bụ, anyị ga-enweta ọkwa na ama anyị ma ọ bụrụ na ọ chọpụta na anyị adapụla site na Eureka ma ọ bụ ihe ahụ anyị jikọtara Eureka, na-enweghị obi abụọ ndị a bụ ngwa ndị kachasị arụ ọrụ anyị chọtara maka Eureka , ma n'ezie ụfọdụ nwere ike ibili ọzọ dabere na mkpa nke onye ọrụ ọ bụla akọwapụtara.
Kedu otu o si arụ ọrụ ma kedu otu anyị ga esi jikọọ Eureka?
Ọfọn, ọ dị nnọọ mfe, olee otu ọ ga - esi bụrụ ụzọ ọzọ a Eureka nwere ngwa maka ama anyị ebe anyị ga-enwe ike inweta ihe ọ theụ allụ niile, ị nwere ike ibudata ya ma iOS dika android mfe site na ụlọ ọrụ ngwa ngwa gọọmentị, na-enweghị nsogbu. Ozugbo anyị ebudatara ha, anyị nwere ike ịga n'ihu ijikọ ngwaọrụ Eureka anyị ngwa ngwa, ihe masịrị m bụ n'ụzọ dị mfe a na-arụ ọrụ a.
Anyị mepee ngwa ahụ wee họrọ ohere nke ịgbakwunye Eureka ọhụrụ, mgbe ahụ anyị ga-pịa ma jide bọtịnụ Eureka mgbe ihuenyo ahụ na-egosi anyị ya na n’ime sekọnd ole na ole ọ ga-ewepụta ụda na-egosi na arụnyere Eureka n’ụzọ ziri ezi na anyị ga-enwe ike ịme Eureka na ihuenyo ahụ wee kpọpụ ya na GPS. Nke ahụ bụ otu esi dị mfe anyị ga-eme ka ọ rụọ ọrụ. Nwere batrị bọtịnụ nwere ike ịgbanwe nke ga-ewe ihe dị ka ọnwa iri, na ihe dị iche iche dị ihe dị ka mita iri atọ, n'ihi ya, ọ bụghị rechargeable, ọ bụ ezie na ọ ga-enweghị uche dị ukwuu ma.
Ọnụ Eureka na ire ere
Eureka a bidoro na euro 19,99 na ị nwere ike ịzụta ya n'ụzọ nkịtị na mbụ Celluarline ihe nke ire ere dị ka Worten, MediaMarkt, Carrefour na El Corte Inglés. Ọ gaghị ekwe omume ịzụta ya site na Amazon ma ọ bụ weebụsaịtị Celluarline n'onwe ya, ọ bụ ezie na anyị ga-amụ anya ma ọ bụrụ na agbakwunye ebe ọ bụla ị na-ere n'ofntanet ma si otú ahụ mee ka ihe dịrị gị mfe site n'ịgbakwunye njikọ ebe a. Ọ bụrụ nzụta ma ọ bụ nwee atụmatụ ị nweta Cellularline Eureka, ị nwere ike ịhapụ anyị ajụjụ gị na Twitter (@agadget) ma ọ bụ ozugbo na igbe igbe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Eureka, ngwa okike ichoro igbanwe igodo gi, ma obu ihe yiri ya
The Realme 3 Pro dị site na June na ezigbo ego